Mogadishu Journal » 2018 » April » 25
Mjournal :-Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa maanta soo bandhigtay sawirada Hub ay sheegtay in laga soo qafaashay xerada Gen. Gordan oo ku taalla degmada Hodan ee Gobolka Banaadir. Reuters ayaa waxa ay sheegtay 600 oo Qori oo nuuca AK-47 ah in laga soo qafaashay 600 oo Askari oo...
Mjournal :-Shirka Amniga Dowladda Faderalka iyo Maamuladda Xubnaha ka ah ayaa ka furmay Magaaladda Garoowe ee Caasimadda Puntland, waxaana ka soo qayb galay kusimaha Madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne kuxigeenka, Wasiir kuxigeenka Amniga Gudaha Faderalka, Agaasimayaasha...
Akhriso Liiska Wasiirada ka banaan xukuumada ra’isul wasaare Xassan Kheyre
Mjournal :-Xukuumada Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre waxaa xiligan ka banaan dhoor Wasaaradood oo Wasiiradii hayay qaarkood xilka laga qaaday halka qaar kalana ay xilkaas siyaabo kala duwan isaga casileen. Isbuucan waxaa xilkii Wasiirnimo iska casilay Afar Wasiir oo isugu jira...
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhageysan doona khudbadaha Musharaxiinta u tartamaya Xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka. Musharaxiinta buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ayaa waxa ay gaarayaan 11 Musharax, waxaana maanta...
Dhalinyarro Soomaaliyeed oo lagu dilay Ohio
Mjournal :-Magaalada Columbus ee Dalka Mareykanka waxaa lagu dilay C/laahi Sacid Sharif oo 30 jir ahaa & Cabdiqaaliq Sacid Maxmed oo 20 jir ahaa. Labada wiil dilkooda ilaa hadda lama sheegin cidda rasmiyan uga dambeysay waxaana lagu toogtay gaari ay ku jireen. Boqolaal ka mid...
Dowlada Uganda oo saldhig ciidamada cirka ah ka dhisan doonta magaalladda Baraawe
Mjournal :-Taliyaha Guud ee Ciiddanka Uganda, General David Muhoozi ayaa sheegay inaysan Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM kuna sugan magaalladda Baraawe ay ka go’een inay Sahayda u soo maraan Waddooyinka. Waxa uu tilmaamay inay sii korodhay Walaaca ay ka qabaan...
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay ciidamada ku jira xerada Gordan
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa shalay gelinkii dambe kulan gaar ah la qaatay Ciidanka ku jira xerada Gen. Gordan ee ku taalla degmada Hodan, kuwaasi oo uu tababaray Imaaraadka Carabta. Ciidankan oo gaarayay 270...